Allah ma aha Ilaaha | Apg29
585 online! | Sidvisningar idag: 5 596 | Igår: 149 115 |
Allah ma aha Ilaaha
Sofia Camnerin sheegan in Ilaah iyo Ilaah kale la mid ah oo dhan, sababta toobad Muslimiinta in Ilaah haddii la jiray kiiska? No, kuwa og yihiin bedelka maragga Muslim.
Muslimiinta The dambe ka marag furaa in ay haatan u imid in la ogaado mid Ilaaha runta ah xagga Ciise Masiix. Ay wadarta Isbadal waa xaqiijinta in Eebe Ilaah la mid ah sida mid ka mid ah hadda waxay xiriir la leedahay. Waxaan u baahan nahay Sidaa daraaddeed mar wada hadal afka baarkiisa ah oo ku saabsan arrintan, la xiro albaabka u sheegeen fiqi ahaaneed deeqsi ah in joogsadaa maragga xaqiiqda dhabta ah
Dadkii badnaa ee Muslimiinta la gediyay la siiyey nolol cusub Ciise oo xiriir la sameysay ah Ilaaha keligiis ah oo ku nool. Waxay ku lug leedahay malaayiin maragga Muslimiinta iyo naftooda oo aan la iska sharaxi karaa! Marna ha ka hor taariikhda ayaa Muslimiinta aad u badan ayaa u soo jeestay in ay Ciise iyo iimaanka Christian.
Ilaah waxa ay hadda ugu yeeray Muslimiinta in badbaadada Ciise sida marna ka hor. Maxaa dhacay sannadihii la soo dhaafay waa mid cajiib ah.
Waayo, waxaa inoo ah in la fahmo baaxadda la xusay waxaa laga yaabaa in shan jeer ka badan revivals ka dhacay dunida Muslimka ka badan shan iyo toban sano ee u dambeeyey ka badan inta lagu jiro taariikhda 1300-sano Islam ee!
Hadda waxaan ku nool nahay waqti taariikhi ah marka ay timaado Muslimiinta badalo si iimaanka Christian. Waa ma aha oo kaliya UTI ee dalal kala duwan, tani waa si gaar ah, waxa kale oo ay Sweden.
Waxaa hadda lagu qiyaasay in ay jiraan dadka ajnabiga ah wax ka badan dalka Iswiidan ku soo jeesan ee dalkeenna. Oo weliba waxay yihiin waddanka u soo guurey, ilaa hadda ka yar tiro badan yihiin kuwa iswiidhishka ah.
Tirada ajinebiga noqdaan xubno ka mid ah kaniisadaha Swedish hadda sii kordhaya ee tirada, ay sabab u tahay tirada sii kordhaysa ee soo galootiga noqdo beddeli. Kaliya ee Simurna Church ee Göteborg lagu baabtiisay ka badan 500 oo kuweeda soo galootiga.
Waxaan rabnaa in aan ku dhiiri labada Masiixiyiinta shaqsi iyo jameeco in ay diiradda saaraan gaarey Muslimiinta la fariinta badbaadada xagga Ciise.
Ciise wuxuu noqon karaa oo bar bilow u ah in aannu wadahadal la Muslimiinta bilowdo. In Islam, Ciise arkaa Nebi weyn oo lagu sheegay 94 Aayado Quraanka. Muslimiinta u baahan tahay in la ogaado in Ciise yahay mid nebi ka sarreeya, Isagu waa badbaadiye.
Qorniinku A in uu yahay mid wax tar leh si ay u fahmaan sida loo markhaati u ah Muslimiinta waa "saaxiibada Muslim My" qoray Peter Ljunggren. Waxaa laga dalban karaa:
Phone: 0382-12261 .
Ciise qudhiisa u waxyooday marar badan dadka muslimiinta ah ee riyooyin iyo iyaga yeedho korid. Hoos waxaa ku qoran link a oo ku siin kara on u ah Muslimiinta iyo halka ay ka qayb qaadan karaan riyooyin sida:
Warqado u editor ee gudbiye ah
Sofia Camnerin ka dhigaysa isku day ah in gudbiye si aad u ogaato haddii aynu nahay Masiixiyiinta iyo Muslimiinta waxay leeyihiin Ilaah la mid ah.
Waxaa iyadu qoray u baahan tahay in la buuxiyo naga si aad u hesho aragti ballaaran oo ku saabsan arrinta.
In ay jiraan mid ahaanshaha u dhaxeeya iimaanka iyo Muslimiinta our ka dhigaysa in ay kaliya ka adag, laakiin waa waxa dhigaya oo shaaca ka qaaday in ay jiraan laba nooc oo ah iimaanka. Haddii ay ahaayeen oo dhan kala duwan la taaban karo, waxa uu noqon lahaa fududahay in this aragto.
Sidaa darteed waa muhiim in la is barbardhigo Kitaabka iyo Quraanka, oo arka kala duwanaan cad oo in ka jiraan. Isla mar marka reading Kitaabka Quduuska ah ayaa hoos u dhacay iyo aqoonta iimaanka Muslim sidaas ma aha weyn, waxaa ka hawl yar in ay noqoto dhibane aaminsan in aan Ilaah la mid ah.
Muslimiinta ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin in ay Ilaah u abuuray dunida, waxaa jira Xujo lahayn in ay tahay isku Ilaah, waxaan Masiixiyiintu rumaysan.
On lid ku ah, ayaa shaaca ka qaaday in aanay isku Ilaah, by hab ay leeyihiin waayo, Kiristanka iyo Yuhuudda. Waayo, Muslimiinta, waxaan dadka Masiixiyiinta ah kuwa sanamka caabuda, sababtoo ah waxaanu u rumayn saddexmidnimada Ilaah. Taasi kama dhigo kuwa, oo keliya, mid ka mid ah gabagabayn kartaa in aan aan rumeynin ilaah isku mid ah.
Ma aha Ilaah la mid ah sida Yuhuudda ee rumaysan maxaa yeelay Muslimiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa in ay dilaan Yuhuudda, "Maalinta Qiyaame idiinma iman doono ilaa Muslimiinta dagaalka ka dhanka ah Yuhuudda. Muslimiinta iyaga dili doonta, oo Yuhuuddiina wuu ku qarin doonaa ka dambeeya dhagxan iyo geedo. The dhagxan iyo geedo ku odhan doonaa, Oh Muslim, halkaas waxaa Yuhuudi ah Gadaal iga mar. Kaalay oo dilo isaga "(Hadit 62).
Yuhuuddu waxay ku, waxaan aragnaa in Kitaabka Quduuska ah, waxaa loo yaqaannaa in si gaar ah ay u noqon kii waxyiga Ilaah ka yimid. Waayo, dadkan, Ilaah wuxuu soo diray nebiyo si ay magiciisa ku hadlin, iyo ugu dambeyntii, Ciise waxa uu ku dhashay dadkan, dadkii uu Quraanka ku baaqay in kuwii dhintay ka mid ah.
No, tirada in aan Ilaah la mid ah abuuraan wareer, waxa aanu kor wax shaqada, sababta aan u galaan lahaa in shaqada iyo boorinayaa Muslimiinta in ay toobad keenaan haddii ay tahay in ay xiriir la Ilaah la mid ah sida dadka Masiixiyiinta ah?
No, xitaa ma in dhammaan magaca kalgacayl iyo yeeesha ka mid ah farqiyada u weyn oo ka jira oo u dhexeeya Ilaah Christian ah iyo Ilaahii in Muslimiintu waxay rumaysan yihiin in, waxaa la odhan karaa in ilaah la mid ah.
Waxa uu ahaa magaca dhamaystiran hal mar, ayaa in aannu mar la Tirraa. faa'iido No waxaa ka. Our waqti u baahan yahay lucidity ruuxiga ah sida Aabayaalkanno non-hogaansamaan.
Holger Nilsson, oo ah tifaftiraha, Holac - magazine sheegid
Eebana ma aha Ilaaha reer Kitaabka Quduuska ah
The diimaha been ah, Islam iyo Kaniisadda Catholic
Magaca Eebe Been Abuurtay on turjumaadaha xaalad
Fiiro gaar ah: Reader Mail, articles iyo comments qoray dadka kale ee aan aniga ahayn, ( Christer Åberg, aasaasaha apg29 ), waxaa laga yaabaa in fikrado aan mar walba ma wadaagno. articles waa guud ahaan la saxiixin.
The aan la rabin - Part 18
Qaybta 18aad ee aan serial ku saabsan carruurnimada. Waxaan u imid inaan dugsiga sare markii aan bilaabay fasalka toddobaad. qayb Tani aad yaabin doona, oo waxay ii sameeyey aawadood markii ay dhacday.
Hey'adda laanta socdaalka oo waydiinaya su aalahan qaldan si loo ogaado haddii aad Christian a
Inta badan 12 su'aalo laanta socdaalka ayaa gabi ahaanba macquul aheyn in aad ka jawaabto, iyo sidoo kale si buuxda u xumaada marka si dhab ah loo baahan yahay oo keliya arrin si loo ogaado haddii qof Christian ah ama aan.
New Age u xaarayaa jidka ka gees ah
By Holger Nilsson In 1980, waxaan leenahay dheeraad ah oo dheeraad ah oo ka soo gudbaya ereyga "New Age". Weli si, si kastaba ha ahaatee, dad badan oo yaabay waxa Da'da New waa wax, inkastoo xaqiiqda ah in malaayiin dunida ku baahsan ayaa la soo taabtay, saameeyeen oo ku lug leh in habkani hadda weeraryahanka nadiifinta. Tusaale ahaan, at sanad-dhamaadka 1986-87, sanadka cusub soo galayo, waxay ahayd ay malaayiin dad ah oo galay cibaadeysiga, riyooday oo falal dhaqan. Waxa ay ahayd soo beegay in this dhacay laakiin waxay ahayd dadaallo isugu jira oo ka mid ah dadka New Age caalamka oo dhan.
Doono mid ka mid ah galmada beddelay si ay samada ku jira?
dadkii oo wuxuu galay samada ayaa beddeli doonaa jinsiga iyada oo loo marayo qaliin?
Reader Mail by David Billström Ciise waa lagu daydo aasaasiga ah si ay u gaaraan baxay in dadka aan Mu'miniin ahyn. Marka Ciisena wuxuu dhex socday dhulka, isaga qudhiisu waa yiqiin waxa meesha ka socda ee dadka isaga u yimid. Waxa uu maanta la mid ah.
A qodbay museum McJesus ee Israa'iil
Dibad reer binu Israa'iil ka gees ah Jani Leinonen "farshaxanka" McJesus muujinayay in a ku qodbeen Ronald McDonald.
The loo baahnayn - Part 17
Hadda waxaan la gariiri sii wadi iyo serial tan iyo yaraantaydii mahad. Sheekadu waxay kordhin doontaa in xoojinta iyo noqdo ka sii yaab leh. qaybta aad u xiiso badan oo aad qabato qaar ka mid ah hadda ka hor.
Ciise aamusnaan A - Ninka la dilay codkii Ilaah - Part 6
Hans Jansson, Uppsala Herodos Antipas mar kale naga hor sheekada kitaabiga ah. Markan Ciise ka hor inta uu taagan yahay. Waxaa markaas lahaa saddex sano tan iyo wiilo Yooxanaa Baabtiisaha.
Liiska Xun - Ninka la dilay codkii Ilaah - Part 5
By Hans Jansson , Uppsala Waxaa jira wax "xariif" iyo wax shar ah falalka Herodos ee macnaha aanu tilmaameynaa. Taasi ii keena waxa ku qoran kitaabkii Genesis.
"Ilaahay ha barakeeyo ilmo iska soo ridid ​​iyo Maraykanka of America"
Qof dumar ah oo hadda lahaa barnaamij Netflix Air halkaas oo ay Amaanay ilmo iska soo ridid, iyo soo gebogebeeyay ereyada: "Ilaahay ha barakeeyo Abortion iyo Maraykanka of America", oo gabya iyo qoob ka ciyaarka waxay si.
In cadaabta, cadaabi dembilayaal
Haddii aad naar, aad u xanuunsanaya. Taasi waxa ay Jahannamo waxaa loogu talagalay. Sida ninkii hodanka ahaa ee Luke 16, aad waxaa la cadaabi doonaa olol. All Dambiilayaashu naar, oo waxay halkaas tag la cadaabi.
Dhallaanka hore u tahay 'ex'
Photo: Screenshot ka Facebook.
Dadka ku nool magaalada New York hadda ka badali karo jinsiga aan shahaado caafimaad. Waxaa intaa dheer, waxay xataa ka bedeli kartaa jinsiga ay dhashay ee.
Haddii aad dhalatay ee jirka qaldan, waxaad mar kale u dhalan karaa
Louise Nelum Sanda Mali "Loui" Sand, 26, waa xiddig Swedish kubadda gacanta oo hadda joojiyo kubadda ciyaaro in baaritaan lagu waayo, daal, jinsiga.
Christian Bale: mahadsan waxyoonay Shaydaan
Qiimaha Actor Best u tageen inay actor Christian Bale in xigeenka filimka, kuwaas oo uga mahadceliyay uu waxyi: Shaydaanku.
America News saabsan dalka Iswiidan: microchip nimo ee maamulka lacagta ee Sweden
In Stockholm, Sweden, dooran 1000 ayaa si ay u doortaan Shop la yar Microsystems ah. Chips nimo ay maqaarka ka yar.
Waxay leedahay in la sameeyo Islam
Reader Mail by Stefan Eliasson Sidaas xaq u ee falalka. Louisa iyo Maren ma ah kuwo gaar ah, ayaa dhawaan laga helay xabaalo wadareedyo ayaa leh 34 Masiixiyiinta gooyay Liibiya.
Vecka 04, onsdag 23 januari 2019 kl. 00:34
gacanta ka gees ah ee Shiinaha
By Holger Nilsson Hadda waxaa jira mid dhab ah in China ay u badan tahay badankiisu ma keeni karaa - waa nidaam ay gacanta ku ah in badantahay in uusan qofna waxa ay awood u fikira.
My badbaadada - Christer Åberg
Markii uu ii keenay, waxaan istaagay, oo mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ee kaniisadda Pentecostal ee iridda la odhan jiray Donald hadlay. Markaasuu weyddiiyey: "Ma rabtaa in aad ku badbaado?" Inkasta oo anigu ma aan garanaynin waxa ay ahayd wax aan u sheegay oo ...
Waxay rabaan in ay gumeysato Mars laakiin ha u safraan dayaxa
Shirkadda baabuurta Electric aasaasaha Tesla iyo CEO Eeloon Miski ayaa qorshaynaysa in ay dadka kale si Mars iyo riyo of Gumaysiga meeraha diro.
Khaniisnimada iyo dadka isku jinsiga xiriir - Stefan Gustavsson
Waa maxay Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay oo ku saabsan khaniisnimada? qoraalka kitaabiga ah iyo wax xuja ah maangalka ah waxaa iftiimiyey in hab aad u aasaasi ah, in cashar aad u fiican by Stefan Gustavsson.
Wada noolaanshaha ma aha, weligii mana jiri doonto weligeed guur
Si aad ula qabsadaan rafiiqa ayaa sheegay in ay galmo kasta oo kale, waa wax la mid ah in aad xaas midba midka kale. Laakiin tani ma aha waafaqsan Kitaabka Quduuska ah.
Ma ogtahay in Kitaabka uu ka hadlaayo badan oo ku saabsan xayawaanka? Halkan waxaan ku leeyihiin liis dheer oo badan oo xoolaha ee Kitaabka Quduuska ah iyo cayayaan qaar ka mid ah la tixraacyada Bible! Fadlan raaxaysan!
Asalka si baaris ruuxiga ah nin
Of Sigvard Seef In aan qoraal rajeynayaa sheegid this, waxaan gelin Masaalkaas Ciise ee ku saabsan "ina badiyay / återvunne" (Luukos 15) sida asalka ah lagu sharraxo, afterimage ah dhacdooyinka qarnigii-jir ah hore.
Sharci-darrada ah si ay u muujiyaan in dumarka laga gooyay by Muslimiinta
Waa sharci darro in runta u yimid labadii dalxiisayaal dumar ah ee Morocco ayaa laga gooyay by Muslimiinta.
Halkan waxaa ka mid ah qof dumar ah timo ka gooyay by Muslimiinta
Laba dumar ah timo cad dhalinyaro ah oo ka Scandinavia ayaa laga gooyay by Muslimiinta markii ay degeen Morocco. Waxa ay ku baaqeysaa dilka haweenka, falalka argagixisada, taas oo dabcan waa, laakiin muddo badan oo sax ah waa in ay tahay a dil Islamic arrimo diineed u waxyoonay by Quraanka.
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 464 926 038 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 131 bloggartiklar, 93 342 kommentarer och 61 360 bönämnen.